Ciidammo caalami ah oo dhoolatus meleteri ku sameeynaya magaaladda Göteborg | Somaliska
Ciidammadda ka kala socda dalalka Mareykanka iyo Faransiiska, ayaa ku sugan magaaladda Göteborg, iyagoo qeyb ka ah tabba bar ciidan oo loogu magac darray “Tabbabarka Aurora” 17. Tabba barkan ayaa sidoo kale waxaa ka qeyb qaadanayo ciidamo kala duwan.
Dhoolatuskan iyo tabba barkan ciidan ee Göteborg lugu sameeynayo ayaa waxaa uu yahay iskaashi ciidan oo ay wada jir u sameeynayaan ciidamo kala duwanoo caalami ah, taasi ii macnaheedu tahay in haddii loo baahdo ay ka soo degi karaan ciidamo meleteri ah. Dhinaca kale Hey’addaha dowladda ee magaaladda ayaa si weyn u ula shaqeeynaya waaxda Gaashaandhiga. Diyaaradaha dagaalka ee f17 ayaa iyagana waxaa qeyb ay ka yihiin howlgalkan.
Sidaasi si la mid ah ayaa magaalooyinka Karlsborg iyo Skövde, ayaa waxaa ka socda tabba barro la mid ah kuwa haatan Göteborg ka bilaabanaya, waxaana ay ciidabkan ugu dambeyntii ay lugtooda geeyn doonaanl Mälardalen iyo Gotland, ah magaalooyin ay xeebo ku yaalaan.
Arrintan ayaa salka ku heeysta xadgud badan oo dhanka bari dalalka ku yaala Iswiidha uga yimid, gaar ahaan dalka Ruush-ka oo marar badan ay diyaaradihiisa iska soo dhex galeen hawadda dalka, islamarkaasina maraakiibka quusta ay sideey doonaan iskaga dhex mushaaxi jiray. Waana dhoolatuskii ugu horeeyey ee Iswiidhan lugu qabto muddo labaatan sanno ah.